Xidhmada Kheyraadka Naqshadeeye Naqshadeeye Colossal 20,000 + Kheyraadka Shatiga La Sii Kordhiyay! | Abuurista khadka tooska ah
Xidhmada Kheyraadka Naqshadeeye Naqshadeeye Colossal 20,000 + Kheyraadka Shatiga La Sii Kordhiyay!
Marar dhif ah ayaan la nimid xirmooyin kheyraad nashqadeeyayaal cufan sida ay yihiin maanta waana runtii ku faraxsanahay inaan soo bandhigo. Dalabkani waa mid soo jiidasho leh maxaa yeelay waa kooxo in kabadan 20,000 kheyraad nooc ka duwan. Waxaa soo saaray labadii sano ee la soo dhaafay koox farshaxanno farshaxanno farshaxanno ah ah si ay u siiso kala duwanaansho isdaba joog ah dhammaan adeegsadayaasha kuwaas oo, duruufo kala duwan awgood, u adkaysan kari waayeen qiimaha ay bixiyeen shirkadaha waaweyn ee waxsoosaarka garaafka ah ee shabakadda. .
Qiimaha iibku waa qiyaastii 119 Dollar, qiimo ugu yar haddii aan isbarbar dhigno qiimaha asalka ah ee xirmada (wax intaa ka badan iyo wax ka yarba ma jiraan 38,000 Dollar) oo ay tahay in 20,000 kheyraad ay matalaan fursado waaweyn iyo xariiqyo shaqo oo lagu dabooli karo wadarta tayada iyo waxtarka. Marar dhif ah ayaan aragnay xirmo ballaaran oo qalab ah iyo qiimo jaban. Hada ka hel halkan!
1 Maxaad heli doontaa
Waxaa lagayaabaa inaan kudhameysano inaan kuu sheegno waxa aadan heli doonin sababtoo ah xaddiga walxaha ay ka koobantahay waa mid aad u weyn. Iyaga ka mid ah:
1177 xirmooyin vector ah oo lagu qiimeeyay $ 15,000: Feektoorku waa cunsurka ugu faa iidada badan ee lagu dhajiyo dhisme kasta oo muuqaal ah mahadnaqa xorriyadda ay na siiso. Sidaad ogtahay, vector-ku waxay xejistaan ​​xallintooda iyadoon loo eegin baaxadda lagu soo bandhigay ama wax ka beddelka aragtida aan ku dabaqno.
114 sawir gacmeedyo lagu qiimeeyay $ 285: Waxay noqon doonaan kuwo aad waxtar u leh gaar ahaan inay ka shaqeeyaan mashaariicda dhiirrigelinta ee noocyada kala duwan leh halkaas oo heer sare oo qurux badan ay lagama maarmaan tahay sidoo kalena la akhrin karo. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu ku yimaadaa cabirro aad u ballaadhan oo yarayn doona dhammaan dhibaatooyinka qallooca ama khasaaraha tayada leh ee suurtogalka ah ee naqshadaha cabbirka dhexdhexaadka ahi sababi karaan.
Baanka muuqaalka sare leh ee lagu qiimeeyo $ 120: Xagee ku aragtay sawir HD ah oo lagu iibinayo wax kayar hal doolar kahor? Haddii aad ogtahay degel kasta oo sameeya dalabyada noocan ah, ii sheeg, in kasta oo aan ka shakisanahay inaad heli doonto. Guud ahaan, bangiyada muuqaalka ee ugu caansan internetka, sawirrada waxaa loo iibiyaa si shaqsi ah iyadoo loo marayo nidaamka amaahda oo sida caadiga ah u tarjuma qiime aad u sarreeya.
3425 sawirro dulsaar ah oo tayo sare leh oo lagu qiimeeyay $ 13,700: Haddii aadan wali kugu filneyn inta kale ee vector-ka ee aan soo sheegnay, wali waxaad haysataa in kabadan seddex kun oo sawiro qeexitaan sare ah si aad ugu awoodo inaad kusoo saarto mashaariic garaafyo aan tiradooda la tirin karin.
Burush burush ah 142: Waxay laga yaabaa inay yihiin aaladda leh heerka ugu sarreeya ee shakhsiga iyo qaabeynta. Burushku wuxuu ku siinayaa nuunis aad u sax ah isla markaana ku dhammeeyaa isku-darkaaga wuxuuna had iyo jeer la qabsan doonaa codka mashruuca laga hadlayo. Waa mid ka mid ah ilaha ugu doondoonista badan ee adeegsadayaasha shaki la'aanna halkan waxay ka heli doonaan noocyo badan oo beddel ah, qaabab iyo qaabab burush ah.
153 plug-ins loogu talagalay Adobe Photoshop iyo Sawir qaade lagu qiimeeyay $ 1,636: Shaqooyin badan ayaa u baahan joogitaanka qaar ka mid ah waxyaabo si ay u bixiyaan qoto dheer iyo saxnaanta fikradda iyo matalaadda. Baakadan waxaad ka heli doontaa in ka badan boqol iyo konton kuwaas oo kaa taageeri doona munaasabado aan tiro lahayn oo kaa caawin doona inaad isbeddel sameyso.
120 nashqadood oo funaanad ah oo lagu qiimeeyay $ 1,800: Waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan haddii waxa aad isku dayeyso inaad horumariso ay yihiin wax soo saar ganacsi maaddaama aad u adeegsan karto jeesjees si aad u horumariso fikradaha cusub oo aad u siiso xalal ku habboon 100% fikradda aad diiradda saareyso.
146 xirmooyin qaab-dhismeedka xallinta sare leh oo qiimahoodu yahay $ 1,879: Waa mid kale oo ka mid ah kheyraadka uu dalbaday naqshadeeyaha hadda tan iyo xaalad kasta, shay iyo qoraal jimicsi wuxuu u baahan yahay maaddooyin ku habboon dhismaha oo aan isku dayeyno inaan ku soo saarno daabacaadda dijitaalka ah.
17 noocyada ugu sarreeya ee lagu qiimeeyo $ 125: Asalka noocyada font ee aan hayno sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo aad muhiim u ah maxaa yeelay nooc kasta oo font ah waxay siineysaa dabeecad iyo taariikh asalka ah bilicsanaantayada, waxyaabaha aan ka kooban nahay iyo hadalka muuqaalka ah ee aan horumarinayno.
21 Casharro Lacag Bixin ah oo Lagu Qiimeeyay $ 272: Ma u baahan tahay inaad cusboonaysiiso farsamadaada oo aad ballaadhiso aqoontaada? Xidhmadan ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu bixiyo aqoon iyo aqoon xirfadeed. Casharrada lagu soo bandhigay xulashadan waxay kuu diyaarin doonaan inaad horumariso halabuuryo heer sare ah oo aad awood u yeelato inaad codsato dhammaan ilahaas si aad u hesho natiijooyinka ugu wanaagsan.
118 ilo loogu talagalay shaqooyinka webka iyo daabacaadda mashaariicda lagu qiimeeyay $ 1,325: Waan dhamayn kari waynay adigoon xusin xirmadan deeqsinimada leh ee agabyada loogu talagalay naqshadeynta webka iyo waliba mashaariicdaas oo yeelan doona warbaahin daabacan.
Sidii aan idhi, baakadani macro waxay si ficil ahaan ah u taabanaysaa dhammaan aagagga iyo shaqooyinka naqshadeynta waxayna u adeegi doontaa guga si loogu horumariyo xirfadle xagga cabbir kasta oo laga helo aragtida farsamo, qalab iyo farshaxan. Ma wax intaa ka badan ayaan weydiisan karnaa dalab noocan ah?
Xirmadaani waxay sidoo kale saameyn togan oo dhaqaale kugu yeelan doontaa maaddaama ay leedahay ruqsad la dheereeyey oo aan lahayn boqortooyo. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u adeegsan karto dhammaan ilaha ku jira ujeedooyinka ganacsiga qaab aan xadidneyn oo xittaa ganacsi ahaan xaddidan, taas oo ah, waad ku iibin kartaa qiimaha aad u aragto inay habboon tahay. Taasi waxay tiri, waxaan u maleynayaa inaadan wax badan ka weydiisan karin qiimahaas hooseeya. Wanaagsan, sax?
Waxaad ku bixin kartaa lacag bixinta xirmadan weyn iyada oo loo marayo Paypal, oo ah kan ugu lacag bixinta badan. Dhammaan waxyaabaha si otomaatig ah ayaa loogula soo bixi doonaa kombuyuutarkaaga (baakadu aad ayey u ballaadhan tahay, qiyaastii 50 Gb ayaa guud ahaan ku baahsan 56 fayl oo la isku daray) markaa hawsha soo degsashadu waxay noqon kartaa mid xoogaa dheer. Maskaxda ku hay inaad awood u leedahay inaad isticmaasho dhammaan qalabka waa inaad haysataa nooc ka mid ah Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator CS3 ama ka sareeya.
Waxaan u maleynayaa inaanan waxba uga harin dhuumaha, kaliya waxaan kaaga tagi karaa muunad yar oo ah waxa ku jira iyo soo degso linkiga:
Xirmooyinka kaydka ah ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Xidhmada Kheyraadka Naqshadeeye Naqshadeeye Colossal 20,000 + Kheyraadka Shatiga La Sii Kordhiyay!
Iyo iskuxirka soo dejinta?
Jawaab Rodolfo Santana
Xidhiidhka soo dejinta ayaa durba la geliyay. Waan ka xumahay warqadan. Dhamaan wanaag!
Waxaan ka maqanyahay iskuxirka soo dejinta :)
Hada waa la heli karaa, salaan!
Waxaan leeyahay xD
Salaan Alvaro! Kaliya waxaan cusbooneysiiyay macluumaadka xiriirka. Dhamaan wanaag!
soo dejiso xiriiriyaha ...
Waad salaaman tihiin, horay baa loo cusbooneysiiyey Dhamaan wanaag!
Ma heli karo xiriiriyaha soo dejinta. Waad ku mahadsantahay hagaajinta.
Jawaab Esteban Beysen